China SHEHWA T45 Hydraulic Top Hammer Egwu Mkpọpu igwe na-emepụta ihe na ngwaahịa | Xuanhua
SHEHWA T45 Full Hydraulic Top Hammer Mgbapu ala igwe
SHEHWA-T45 haịdrọlik zuru oke hama elu mkpọpu ala igwe na-eji ụwa a ma ama YAMAMOTO nnukwu ike hydraulic egwu mkpọpu ala maka ọrụ ọrụ ...
Nkọwa nke SHEHWA T45 Full Hydraulic Top Hammer Mkpọpu mkpọpu ala
SHEHWA-T45 haịdrọlik zuru oke hama elu igwe na-egwu mmiri na-eji igwe egwu YAMAMOTO siri ike nke ọma maka ịpị ọrụ. Okwesiri maka udiri ihe obula di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche, ma karie ya nke oma maka oru ndi ozo di elu karie ike. The perforating ọsọ bụ ngwa ngwa, na mmepụta arụmọrụ dị elu, keukwu mmanụ ụgbọala oriri bụ ala, na ájá mwepụ mmetụta dị mma. Ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma, nchekwa nchekwa na gburugburu ebe obibi na-egwu egwu nkume.
Anyị Full haịdrọlik n'elu top-hama mkpọpu ala rig nwere zuru okè Nchikota:
1. Hydraulic nkume akuakuzinwo
YAMAMOTO YH-100 hydraulic rock drill bụ ihe bụ isi nke igwe ahụ, nke na-emetụta ntụkwasị obi na ndụ ọrụ nke igwe niile. A na-arụpụta adapu nkume YH-100 na ụlọ ọrụ ndị Japan, nwere ezigbo ntụkwasị obi, sie ike ma sie ike. Kemgbe 1979, ọ nyela ọtụtụ ndị na-emepụta ihe egwu mmiri nke ụwa. Igwe ihe nkedo nke hydraulic nwere ikike mmetụta nke 20.6kw na ugboro ole ọ ruru 2500bpm, nke dabara adaba maka arụmọrụ mkpọpu ala na oghere nke 76mm ~ 127mm.
2. Compressor nke Hydraulic Top Hammer Na-egwupu mkpọpu ala
American Sullivan-Palatek bụ onye ama ama ama ama ama ama ama n'ụwa niile, yana mgbakọ ya a ma ama maka arụmọrụ dị elu, ntụkwasị obi na ogologo ndụ. Compressor orùrù olu bụ 10.5 m³ / min, na orùrù mgbali bụ 10.5 mmanya. Ọbụna n'okpuru ọnọdụ ọdịdị ala dị mgbagwoju anya, ọ nwere ike inye gas zuru oke maka ihicha oghere ma jiri nwayọọ na-agbapụta okwute.
3. Usoro nchịkwa nke igwe Hydraulic Top Hammer Mgbapu ala
Usoro nchịkwa na-egwu egwu egwu pụrụ iche ma dị mfe ịchịkwa nwere ike ịhazigharị ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, nrụgide propulsion, igbu egbugbu na nrụgide mmetụta dịka ọnọdụ okwute ahụ, iji nweta ọnọdụ ọrụ kachasị mma, ma kpochapụ ihe ọghọm na-adịghị mma dịka ijide eri eri. A na-ahọpụta ihe ndị dị na sistemụ hydraulic site na ụlọ na ndị si mba ọzọ na-emepụta ndị ama ama nke ọma iji hụ na ntụkwasị obi na ngwa ngwa nke igwe niile.
Malite ịgba bit & mkpanaka Oghere dayameta 76-127mm
Malite ịgba mkpanaka T45 / T51
Nkume Nkume Nkume nkume YH-100
Mmepụta ike 20.6kw
Bugharia oso 0-150RPM
Compress Emeputa Sullivan-Palatek
Mgbapụ 10.5m³ / nkeji
Injin Emeputa Cummins
Akụkụ 9200 * 2350 * 3100mm
Ibu ibu 12500kg
Nke gara aga: SHEHWA-380-DTH Mkpuchi Pneumatic
Osote: SHEHWA X5 Hydraulic Drilling rig